Allgedo.com » Ilma adeerayaalow Cali Raage hakaraacina Nabiga Ilaahey – By Adam Abuzuhri
Print here| By: allgedo.com: Tuesday, October 16, 2012 // Jawaabaha waa la xiray
Maanta iyo maqaalkeena, wuxuu kusaabsanyahay hadal aan ka soo xigtey Sheekha Soomaaliyeed ee caanka ah Sheekh Maxamuud shibilli ee kusugan magaalada Nairobi, mar aan tagay masjid muxaadaro uu ka jeedinaayey masjidkiisa Al-Hidaayah.
waa magaca looga yaqaan wadamada Carabta oo ay aad ugu badanyihiin walow ay taariikh ahaan kasoo farcameen wadanka India xiligii gumaysiga; waxayna kamid ahaayeen ayaa laleeyahay xarakaat farabadan oo uu kadanbeeyey gumaysiga Ingiriiska sida kooxda looyaqaan Al-Qadyaaniyiinta.
Aas-aasaha xarakadan oo la’oronjirey Axmed Khan oo reer India ah, wuxuu ahaa nin Qur’aanka kufasira caqligiisa kadib markii uu Axaadiista kusoo rogay shuruuda aad u adag, ilaa uu markii dambe inkirey isagoo lasoo istaagey “Qur’aanka oo kali ah ayaa nagu filan”.
Inta aan mar kale kulmayno waa walaalkii Adam Abuzuhri oo idinleh Allaha diinta nagu sugo.
Wixii talo iyo tusaalo ah, kusoo aadiAdam Abuzuhri, abuzuhri1@gmail.com.